Mareykanka oo sheegay in 35 dagaalyahan oo Al-Shabaab ah ay ku dileen gobolka Hiiraan - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMareykanka oo sheegay in 35 dagaalyahan oo Al-Shabaab ah ay ku dileen gobolka Hiiraan
February 26, 2019 Puntland Mirror Somalia 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Milatariga Mareykanka ayaa Isniintii sheegay in ay duqeyn ku dileen 35 dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab.
Mareykanka ayaa fuliya weeraro joogto ah gudaha Soomaaliya iyaga oo taageeraya Dowladda Federaalka Soomaaliya, taasoo muddo sannooyin ah la dagaalamaysa maleeshiyada Al-Shabaab.
Bayaan kasoo baxay Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa lagu sheegay in duqeyntu ay Axadii ka dhacday meel u dhow magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan.
Kismaayo-(Puntland Mirror) Madaxweyne ku-xigeenka kowaad ee maamulka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan iyo ku-xigeenka labaad Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud (Luga Dheere) ayaa maanta si rasmiya loogu dhaarshay magaalada Kismaayo ee xarunta maamul goboleedka Jubaland. Sidoo kale waxaa [...]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa soo gaabinaya safarkiisa Itoobiya waxaana uu dib ugu noqon doonaa magaalada Muqdisho si uu uga qeybgalo aaska qaran ee Wasiirkii Howlaha Guud iyo Dib u Dhiska kaasoo [...]